WOWOW Nickel-cadaayad Soo Jiida qasabadaha Isku-dhafka Jikada - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada / WOWOW Burushka Nickel jiido Qasabadaha Mashiinka Mashiinka
WOWOW Nadiifiya Nickel Jiidi Tuubooyinka Isku-Darka jikada
Kushiinka Qubayska Jikada ee Qubayshu waa caddeyn daadsan oo loogu talagalay tijaabooyinka furitaanka iyo xidhitaanka dhowrka ah, caddaynta daadinta dhowr tijaabo oo furitaan iyo xiritaan, caddeyn-qarxin iyo daadinta, waxqabadka deggan, cimri dheelitiran oo waara, waara.
2310800 tilmaamaha rakibaadda
Soo jiid qasabada jikada 2310800
Miyaad dooneysaa inaad taabasho gaar ah siiso jikadaada qashin qubka jikada? Markaa WOWOW wuxuu kuu hayaa tubada qolka jikada ee adiga kuu gaar ah, oo xitaa aad naftaada ku rakibi karto indhaha isha. WOWOW ayaa fududeysey in la rakibo tukaankan ganacsi ee jiidaya jikada. Kaliya 3 talaabo oo fudud, waxaad ku siin kartaa jikadaada dhammeystir buuxa qalabkan xiisaha leh ee jikada. Marka la rakibayo, marka ugu horeysa, waxaad ku adkeyneysaa inaad soo jiidato tuubada jikada jikadaada dusha sare ee jikada. Marka labaad, waxaad ku xiraysaa kulka culeyska tuubada biyaha si ay tuubbada hoos u jiideyso u shaqeyn doonto si habsami leh oo ay si fudud dib ugu laabanayso. Midda saddexaadna, waxaad ku xidhi doontaa labada tuubooyinka biyaha - qabow iyo diiran - isku xirka biyaha biyaha jikadaada.
Xaqiiqdi waa mid sahlan, oo ay la socoto tilmaamaha cad iyo dhammaan agabka lagu rakibay, uma baahnid xirfadle qaali ah oo kugu kici lahaa lacag badan. Rakibida way fududahay markii aad leedahay sagxad jikada leh oo ay ku jiraan 1 ama 3 god oo la sii daayay. Fiidiyowga kulanka ee WOWOW waxaad ku dhammeyn kartaa rakibida wax ka yar 30 daqiiqo. Sow taasi ma aha mid weyn?
Hawlaha biyuhu waxay daadiyaan tubbada jikada
Qulqulkaan ganacsi ee hoos udhaca jikada waxaa lagu siinayaa 3 bedelkii 2 biyo. Marka ugu horeysa waxaad isticmaali kartaa habka durdurinta ku habboon buuxinta dheriyo biyo tusaale ahaan. Marka labaad, heerka buufin cadaadiska sare wuxuu bixiyaa hawo qubays si loo nadiifiyo aagagga waaweyn, tusaale ahaan biyo-dhaqe. Midda saddexaadna, waxaa lagu siinayaa qaab hawleed hagaagsan oo muujinaya xoog aan la rumaysan karin. Qaabkan dhididka ah waxaad si dhakhso leh u nadiifin kartaa una dhaqi kartaa weelka jikadaada. Dhammaan wasakhda ayaa laga saari doonaa arrintaas si fudud. Xaqiiqdii way ku farxi doontaa. Madaxa wax iibiyahu wuxuu muujiyaa sida aids-ka ABS tayo sare leh oo nabadgelyo leh sidoo kalena leh NSF-aqoonsan yahay.
Xunbo-dhiska isku-dhafan ee tubadan qolka-jikada ayaa ka hortagaya ku daadinta iyo daadinta biyaha. Xumbada qasabadaha waxay abuurtaa goob biyo ilaalin oo yareyneysa awoodda biyaha marka ay ku dhacdo saxanka jikadaada. Iyadoo xumadan cusub, buufinta ayaa la dhimay iyada oo aan ka yarayn 90%. Way fududahay in la xakameeyo heerkulka biyaha iyo mugga qulqulka biyaha ee kabaalka birta ee birta ah. Birta birta ahi way fududahay oo way fududahay inay ku shaqeyso, oo heerkul sare ee heerkiisu gaarayo 360-digrii ayaa ku siinaya marin-u-maydh ballaaran oo dhammaystiran. Ka sokow, tuubada biyuhu waxay ka samaysan tahay bir aan kala go 'lahayn sidaa darteedna waxay u adkaysataa kuleylka aadka u sarreeya. Tuubada jiidista leh ee leh murgaduhu waa 5'10 ”oo had iyo jeer si tartiib tartiib ah ayey dib ugu noqotaa markasta oo la isticmaalo
Ganacsiga tuurista tubada jikada
Qashinkan jikada jikada waxaa loo sameeyay isticmaal ganacsi. Goobaha ganacsiga, sida maqaayadaha tusaale ahaan, dalabka ayaa ku badan qalabka qalabka jikada. Qalabku waa inay iska caabiyaan inay awood u yeeshaan inay xamili karaan gacan-culus oo taas ka sokow waa inay bixiyaan ku dhawaad ​​boqolkiiba 100% heerka waxqabadka. Xirmooyinka tuubooyinka jikada oo burbursan waxay u dhowaan lahaayeen musiibo. Sababtaas awgeed, WOWOW waxay adeegsanaysaa agabyo badan oo adkaysi u leh oo awood u leh inay ku qabtaan meelaha ugu adag. Taasi waa waxa aad isla markiiba ogaan doontid markii aad ku qabato tuubbada tubada jikada ee gacmahaaga ku jirta. Waxaad dareentaa tayada isla markiiba.
Qolka jikada ee jikada ee WOWOW waxaa laga sameeyay SUS 304 steel oo aan dhammeystirneyn oo ku dhammaaday Nickel naxaas ah. Birta noocan ahi waa mid ka yar ficilkeed iyo magnetic ka yar tusaale ahaan bir kaarboon. Birta noocan ahi waa mid waarta, waxay bixisaa iska caabin aad u wanaagsan waxayna si ba'an u daweyn kartaa dillaaca. Wax kiimikooyin ah oo loo adeegsado noocan oo kale ah ee birta aan cillad lahayn ee ay kula guuri karaan cuntadaada. Tani waxay ka dhigeysaa tubadan jikada ee WOWOW gebi ahaanba amaan u ah caafimaadkaaga iyo xulashadaaga joogtada ah ee jikadaada.
Deck Mount tuubbada tubada jikada
Dheeraad ahaanta, waxqabadka iyo waxqabadka, waxa kale oo aad rabtaa qasabada qolka jikada inaad siiso saameyn qurux badan jikadaada. Markaad ku riixeyso tuubada jikada WOWOW waad ku hubsan tahay saameyntaan. Naas-nuujinta loo yaqaan 'nickel' ee jaranjarada ah ee jikada ayaa siinaysa casriyeyn heer sare ah jikada kasta. Naqshadeynta tuubbooyinka dusha sare ee jikada waxaa loo arki karaa mid ahaan, warshadeed ama casri. Naqshaddan qaaska ah waxay sahlaysaa in lagu daro noocyo badan oo jikooyin ah. Waxkastoo naqshadeynta jikada ay tahay inaad haysato, qashinkan qulqulka jikada waxaad siin doontaa casriyeyn aad u wanaagsan jikadaada. Taasi waa yar tahay, laakiin taasi waa mid cajiib ah.
Maaddaama tubadan qashin-qubista jikada ay saaran tahay dhajis, waxay noqon doontaa udub-dhexaadka soo jiidashada naqshadda jikadaada. Sida goobaha focal dabiiciga ah, tubooyinka jikada sida caadiga ah waxay soo jiitaan dareenka araggaaga. Gaar ahaan, marka tuubadaadu saran tahay. Xaqiiqdii waxaad ku siin doontaa aragti qurux badan qiiqa jikada ee jiilaalka. Maaha meeshii ugu dambaysay sababtoo ah dhammaystirkeeda naxaasta leh ee cilladaysan. Tani waxay siinaysaa taabasho qurux badan suul kasta oo jikada ah, oo ay weheliso naqshad u gaar ah oo casri ah, waxaad ku haysataa tubbada jikada gacmahaaga taas oo isbadal ku samayn doonta.
Soo dejiso damaanadda tubada jikada
WOWOW waxaan jecel nahay badeecadeena waxaanan dooneynaa inaan ku siino waxa ugu fiican. Sida inta badan qulqulaha jikada ee WOWOW, waxaa lagu siinayaa muddo 5 sano oo damaanad qaadis ah. Haddii tubada qolkaaga jikada aysan u shaqeynaynin sida aad rabto, waxaa lagu siin doonaa nooc cusub oo tuubada jikada oo lagu beddelo. Taasi waa ballanqaad aan u sameynno macaamiisheenna dhammaantood. Maaha wax aan jirin, WOWOW waxay noqotay astaan ​​caalami ah oo lagu yaqaanay tubooyinkeeda jikada oo tayo sare leh qiime macquul ah. Qiimaha ugu fiican ee lacagta aad ka heli doonto WOWOW markay tahay tubooyinka jikadaaga.
Sida aan aaminsanahay alaabadayada, WOWOW waxay kuu soo bandhigaysaa damaanad 90 maalmood ah oo lacag celin ah sidoo kale. Haddii aadan jeclaan doonin inaad soo jiidato tubada qolka jikada sida aan kaa filayno inaad noqon doonto, si buuxda ayaan kugu soo celin doonnaa iyada oo aan wax dhibaato ahi dhicin. Sidoo kale waa ballanqaad aan adiga kuu qaadno!
Faa'iidooyinka tubada qasabada jikada ee si kooban:
Waxay siisaa walax-fuul jikada kasta
Isku-darka qaaska ah ee naqshadeynta naqshadaha caadiga ah iyo kan casriga ah
Astaamaha 3 hababka biyaha
Ka sameysan bir aan kala maarmin
Way fududahay in la nadiifiyo oo ay fududaato in la joogteeyo
Si fudud loo rakibo 30 daqiiqo
5-sano damaanad ah
SKU: 2310800 Categories: Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada, Qubeyska jikada Tags: Jikada jikada ee jikada, Hal gacan, Buufiyo
21.4 x 11.1 x 2.8 inches
Ahama / Zinc Daawaha / naxaas
Seddex Qaab: Habka durdurinta / Qaabka buufinta / Habka xaaqidda
Qasabadda qasabadda jikada; 50cm Hoos biyo kulul & qabow; Hoos u dhig buufinta; Saxanka Deck; Qalabka Fiilooyinka
WOWOW Heerka Sare ee Qiimeynta Sare ee Loogu Talagalay ...
La iibiyey: 69
WOWOW Jikada Commercial Dheriga Dheriga Baasto Baastada C ...
La iibiyey: 46
WOWOW Bakhaarka Isku-Hayaha Isku-Shafka jikada Soo Wareega Jugta ...
La iibiyey: 106
JOOJINKA JOOJINKA JOOJINTA DUGSIGA DIYAARINTA JOOBKA DIYAARINTA EE DIIWAANKA EE DARAARAHA